Baaxadda isticmaalka silica qiiqa leh iyo xaddiga ficilka lagu daray
Codsiga quudinta Silica khamiirka leh waxay leedahay soo-jiidasho xoog leh iyo guryaha nuugista qoyaanka sababta oo ah cabbirka walxaha yaryar, aagga dusha sare ee gaarka ah iyo qaab-dhismeedka shabakadda saddexda-cabbir ee gaarka ah. Warshadaha quudinta, horudhaca macdanta, hormoonnada fitamiinnada iyo waxyaabaha kale ee budada ah laguma shubi karo f ...
Silica macmacaanka ah ee loo isticmaalo xabagta epoxy
Waa maxay cusbi epoxy? Rinjiga Epoxy waa erey guud oo loogu talagalay fasalka polymers -ka oo ay ku jiraan in ka badan laba kooxood oo epoxy -ga ku jira maaddada. Waa badeecada uumiga ee epichlorohydrin iyo bisphenol A ama polyol. Waa cusbi kuleyliyaha sababta oo ah dhaqdhaqaaqa kiimikada ee kooxaha epoxy, kaas oo ...
Codsiga silica qumman ee warshadaha la isku qurxiyo
Silica la miiray waa mid aad u fiican oo silikoon aan caadi ahayn oo heerkiisu sarreeyo oo leh cabbir yar, qaybinta cabbirka qayb isku mid ah, aag gaar ah oo weyn oo gaar ah, iyo dhaqdhaqaaq dusha sare ah; Marka silica dhalanteed lagu daro nidaamka dareeraha, xidhmooyin hydrogen ayaa samaysma inta u dhaxaysa sil ...
Zhejiang Fushite Silicon Co., Ltd ayaa la xaqiijiyay ISO45001: 2018
ZHEJIANG FUSHITE SILICONE CO., LTD waxaa ka go'an inay siiso shaqaalaha ilaalin wax ku ool ah, goobo shaqo oo nabdoon oo caafimaad qaba. Waxay had iyo jeer u hoggaansantaa fikradda badbaadada ee "shilalka oo dhan waa laga hortagi karaa" iyo siyaasadda SHE ee "badbaado leh oo caafimaad leh, bay'ada u fiican, oo buuxa ...
ZHEJIANG FUSHITE SILICON CO., LTD waxay heshay 'ZHEJIANG MADE' Shahaadada sumadda sumadda tayada warshadaha silica
Si loo abuuro heer tayo wax -qabad oo sarreeya, si buuxda u buuxiso shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha, oo ballaariso suuqa ganacsiga silica, ZHEJIANG FUSHITE SILICON CO., LTD waxay soo saartay 'ZHEJIANG MADE' shahaadada sumcadda tayada warshadaha silica bishii Luulyo 2020. Iyadoo mudnaanta sare ...
Fursadaha iyo caqabadaha ka jira suuqa silica qaaliga ah ee adduunka
Xogta isbeddellada warshadaha adduunka ee ugu dambeeyay ayaa muujineysa in baahida loo qabo silica qaaliga ah ee aadka u sarreysa ay sii kordheyso 2021. Sida laga soo xigtay warbixinta cilmibaarista ee Global Market Insight, suuqa silica qaaliga ah ee adduunka waxaa lagu qiyaasay inuu qiimihiisu yahay $ 1.59 bilyan sanadka 2020, waxaana la filayaa inuu dhaafo $ 2.3 bilyan marka la gaaro 2026. CAG ...
Alaabta Kulul, Khariidadda bogga Aerosil Fumed Silica, Aerosil 200 Silica Fumed, Hydrophilic Fumed Silica, Amorphous Fumed Silica,